'त्यो नेपालमाथि हस्तक्षेपको प्रारम्भ थियो' | Citizen Post News
विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद मोहनबहादुर बस्नेत प्रभावशाली नेताका रुपमा चिचिनुहुन्छ । नेता बस्नेत नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको यसअघिको सरकारका पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उनै प्रभावशाली नेता बस्नेतसँग सीपोष्टन्यूज डट कमका लागि निरोज चौलागाईले गरेको कुराकानी प्रस्तुतः
यहाँ अघिल्लो सरकारको प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकार दुई तिहाई बहुमतमा छ । यो सरकारले महत्वपूर्ण निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पूर्वाधारहरु खडा गर्नुपर्ने हो । तर दुभाग्र्य यो सरकार हिजो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेका कामकारवाही र निर्णय उल्टाउनमै व्यस्त छ । दुई तिहाईको दम्भमा सरकारले गरेका निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि अहिले सरकार योजनाबद्ध तरिकाले सर्वोच्चलाई कमजोर पार्न उद्यत छ । अहिलेको अवस्थामा तत्कालिन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति र निर्णयहरु बदर नगर्नु तथा नहटाउनु भन्दै सर्वाेच्चबाट अन्तरिम आदेश जारि भइसकेको छ । बाम गठबन्धन सरकारलाई अहिले आएर आफुले चालेको कदम सायद कानून विपरित मात्र नभई संविधान विपरित नै भएको महसुस भएको होला । र, अर्का कुरा अहिले पनि तत्कालिन सरकारले गरेका महत्वपूर्ण काम कारवाही हामी मान्दैनौँ, उल्टाउछौँ भनिरहेको छ जुन कानुन सम्मत छैन् ।
एक ताका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाउने ब्यापक खेल भइरहेको सुनिन्थ्यो, के हो सत्य ?
अहिले सबै संरचनामा जनताको प्रतिनिधि आइसकेका छन् । सबै खाले संरचना हाम्रो पालामा बनेका थिए भने अहिले त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । तर अझै पनि उनीहरु अघिल्लो सरकारले गरेका सबै निर्णयको विरोध गरिरहेका छन् । हुँदाहुँदा निर्वाचित भई नियुक्ति भएका प्रदेश प्रमुखलाई समेत हटाउने तयारी भएको सुनियो । यो विषयमा धेरै चर्चा र विरोध हुन थालेपछि मात्र उनीहरु पछि हटेका हुन् । त्यहि प्रदेश प्रमुखले सपथ खुवाएका मन्त्रीहरु सत्तामा रहने तर प्रदेश प्रमुख हटाउने काम प्रतिसोधबाट प्रेरित भएको मलाई लाग्छ ।
के त्यसो भए दुई तिहाई बहुमतको बाम गठबन्धन सरकारले प्रतिसोधको राजनीति मात्र गरिरहेको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
अहिलेको कम्यूनिष्ट सरकार राज्य सत्तालाई रणनीतिक रुपमा कसरी कब्जा गर्ने र मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत तथा साधनहरुलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रयामा राख्ने भन्ने विषयमा योजनाबद्ध तरिकाले लागेको छ । राज्यका हरेक ठाउँमा विभिन्न समिति गठन गरी पैसा बाड्ने काम मात्र भएको छैन्, असुल्ने काम पनि भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री खाली अहिले पनि उखानटुक्का गरेर मात्र समय खेर फालिरहनु भएको छ । तत्काल संभावना नै नभएको रेल र पानी जहाजको सपना जनतालाई बाँडिएको छ । अहिले पनि केबल जनतालाई उल्लु बनाउने काम मात्र भइरहेको छ । अहिलेको अवस्था सत्तारुढ दलका नेताहरुनै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट छन् । रेल कसरी आउँछ, पानी जहाज कसरी ल्याउन सकिन्छ ? त्यसका बारेमा कुनै अनुसन्धान छैन् । मात्र भाषणमार्फत जनतालाई झुटो आश्वासनमा बाँच्न सिकाउने काम भएको छ । ‘कहिले घरघरमा ग्यासको पाईप पुग्छ, जनताले अब सिलिण्डर बोक्न पर्दैन’ भनिन्छ त कहिले रेल र पानीजहाजको सपना बाँडिन्छ । प्रधानमन्त्रीका यस्तै हावादारी कुरा सुनेर विदेशीले पनि नेपालका प्रधानमन्त्री पनि ‘साइको’ हुन् कि क्या हो ? भन्दै सोध्न थालेका छन् ।
भनिन्छ नि ‘सपना नदेखि साकार हुन्न ।’ के नेपालमा रेल र पानीजहाज ल्याउने कुरा संभव छैन र ?
अहिले पनि प्रधानमन्त्रीबाट हावादारी गफ र भाषण दिनेक्रम रोकिएको छैन् । रेल र पानीजहाज ल्याउने कुराभित्र पनि षड्यन्त्र छ । जुन प्रत्येक नेपाली जनताले जानकारी पाउन निकै जरुरी छ । कुरा के हो भने अहिलको सरकार बनाउनेदेखि बाम पार्टीहरुलाई एकीकरण गर्ने काम उत्तर–दक्षिणको योजनामा भएको हो, जुन मैले खुलेरै भन्दै आएको छु । सरकार अहिले त्यसको गुन कसरी तिर्ने भन्ने तर्फ सोचमा छ । छिमेकीको सोहि स्वार्थ पुरा गर्नका लागि रेल र पानीजहाजको कुरा निकालिएको छ । नेपालले दक्षिणलाई गुन तिर्ने भनेकै नेपालको खोलानाला र नदी दिएर या विक्री गरेर हो । पानीजहाज ल्याउन उच्च बाँधहरुको निर्माण गर्नुपर्छ । उच्च बाँधहरुको निर्माण गर्ने वित्तिकै नेपालको अधिकांश तराई भूभाग डुबानमा पर्छ ।
त्यो सँग सरकारलाई कुनै मतलब छैन् । त्यसो त दक्षिणलाई खुसी पारेर सत्तामा टिकिरहने कम्यूनिष्टहरुको रणनीति पनि हो । रेलमा पनि रणनीति छ । त्यो चाइनालाई धनि बनाउने रणनीति हो । रेलको फाइदा नेपाललाई भन्दा चीनलाई बढि छ, नेपालसँग न कुनै विश्व बजारमा पुर्याउने उत्पादन छ । तर चीनसँग सवै कुरा छ । त्यस कारण रेल र पानीजहाजको कुरा निकालेर उत्तर–दक्षिण छिमेकीलाई खुसी बनाउन सरकार लालायित छ ।
यो सरकार दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली राष्ट्रवादी सरकार हो । तपाईले कुन आधारमा त्यसो भनिरहनु भएको छ ?
म तपाइलाई यो पनि स्मरण गर्न चाहान्छु कि डा. भिमार्जून आचार्य जो बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् हुनुहुन्छ । ‘भारतले लगाएको नाकाबन्दी प्रधानमन्त्री ओली ज्यूको अनुरोधमा भएको हो, त्यो चुनाव जित्ने बातावरण बनाउनका लागि हो’ उहाँले भनिराख्नु भएको छ । आचार्यले यसो भन्दै गर्दा ओलीज्यूले त्यसको खण्डन गर्न सक्नु भएको छैन् । मुलुकलाई नै कमजोर पारी आफू सत्तामा रहिरहन अहिले पनि विदेशीलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ । र, यो कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण ताका छताछुल्ल भइसकेको छ ।
मोदी नेपालको भ्रमण आउँदा ताका जनकपुरमा राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गर्नु, नेपाली मिडियालाई प्रवेश निषेध गरी भारतीय मिडियालाई फोटो तथा भिडियो खिच्न निषेध गरिएको मुक्तिनाथ मन्दिरबाटै लाइभ गर्न दिइनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्यो । राष्ट्रियताको ठूलो नारा जप्ने प्रधानमन्त्री ओलीज्यूको त्यतिबेला राष्ट्रियता कता गएको थियो ? अब त जनतालाई प्रष्ट भइसकेको छ नि, मिडियाकर्मी साथीभाईहरुले पनि अब त बुझ्नुपर्छ कि अघिल्लो सरकारले के गरेको थियो र अहिलेको सरकारले के गरिरहेको छ ? त्यतिबेला नेपाली मिडियालाई प्रतिवन्ध लगाउने पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा भएको थियो, जुन प्रष्ट भइसकेको छ ।
यसअघि नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीलाई नेपाल सरकारले नै सुरक्षा दिन सक्ने तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा किन सुरक्षा दिन नसक्ने ? योजनाबद्ध तरिकाले नेपालको प्रहरी, सेना र सशस्त्रलाई कमजोर पार्ने एवम् मनोबल गिराउने काम मात्र भएको छैन्, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको बईज्जत प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा भएको छ । भारतीय सेना नेपाल भित्र्याउने प्रधानमन्त्री ओली कसरी राष्ट्रवादी भए ? यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो भारतकोे नेपालमाथि हस्तक्षेपको प्रारम्भ थियो ।
भारतले यसरी गरेको हस्तक्षेपलाई ओलीज्यूले मजाकमा उडाइरहनु भएको छ । जनकपुर क्षेत्रको सिमानामा जर्वजस्ती भारतीय सुरक्षा फौजले आफ्नो भवन बनाइरहेको छ । यस विषयमा सरकारले एक शब्द बोलेको छैन् । शसस्त्र प्रहरी बलले एक्सन लिन थाले पनि उनीहरुलाई रोकिएको छ । यो सबै लामो समयसम्म सत्तामा टिक्ने बामगठबन्धनको तयारी हो ।
हिजो काँग्रेस सत्तामा हुँदा गरेका सवै कमजोरी र गल्ती पनि सहि हुने तर सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै अर्को सरकारले गरेका जुनसुकै काम कारबाहीको विरोध गर्ने तरिका त्यो त प्रजातान्त्रिक संस्कार भएन नि ?
सरकारमा ‘जे गरे पनि हुन्छ, हामी नै सर्वेसर्वा हौं’ भन्ने सोच पलाएको छ । त्यो नै हो–अधिनायकवाद । काँग्रेसले त्यसैको विरोध गरेको हो । गत महिनाको घटना तपाईहरुलाई पनि थाहा नै छ । नेपालबाट सांस्कृतिक सम्मेलनमा भाग लिन विदेश हिँडेका उपकुलपतिजस्तो सम्मानित ब्यक्तिलाई विमानस्थलबाटै अपहरण शैलीमा पक्राउ गरियो, बन्धक बनाइयो । बीर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरलाई पक्राउ गरेर गृहमन्त्रालयमा लगेर थर्काउने काम भयो ।
आफुले भनेको अनुसार अवैध काम गर्न दबाव दिने सरकारको त्यस्ता रवैया काँग्रेसले सँध्रै विरोध गर्छ, हिजो पनि गरेको हो, भोली पनि गर्छ । काँग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छ, लोकतन्त्रमा नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने काम सरकारबाट हुन्छ भने काँग्रेसले त्यसको रक्षा गर्छ । लोकतन्त्रकै लागि नेपाली जनताले रगत बगाएका हुन् । सर्वसत्तावाद हावी हुँदै गएको छ, अधिनायकवाद लाद्दै उनीहरु अघि बढिरहेका छन्, त्यसको काँग्रेसले मात्र होइन, सम्पूर्ण नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा राम्रोलाई राम्रो भन्ने र नराम्रोलाई भन्न सवैले पाउँछन्, पाउनुपर्छ ।
यहाँको मतलब प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकार ‘अधिनायकवाद’ तर्फ उन्मुख छ भन्ने हो ?
विलकुलै । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै एउटा ताजा घटनालाई हेरौं न । बामगठबन्धन निकट ब्यवसायीले टेण्डर एकलौटी हत्याउन गरेको ढुंगामुडा, तोडफोड र प्रशासनको दुरुपयोग । अरु ब्यवसायीलाई प्रवेश नै नदिने कति ठूलो षड्यन्त्र, जुन अहिले पनि सिन्धुपाल्चोकमा चर्चाको विषय बनेको छ । यो भनिरहँदा केन्द्रसम्म के के भइरहेको तपाई सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ । अहिलेको सरकार र उसको पार्टी निकटका कार्यकर्ताहरुलाई समेत टेण्डरमा कमिसन चाहिने । कमिशन नपाएकै कारण मध्यभोटेकोशी हाईड्रोपावरमा निर्वाचनमै जितेको मेयरले तालाबन्दी लगाएका छन् । कम्यूनिष्टहरुको प्रमुख योजना नै मुलुकको सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्थामाथि कब्जा जमाउनु हो । निरङकुश शैलीबाट मुलुक हाँक्ने क्रममा नै अधिनायकवाद जन्मिने हो । त्यो खतरा अहिले झन बढेर गएको छ । वुद्धिजीवीहरुलाई तर्साउने, विपक्षलाई सफाय गर्ने, सोझा–सिधा जनतालाई धम्क्याउने काम तिब्र गतिमा बढेको छ । कि यो सरकारले जे गरे पनि हुन्छ ? सरकारको कार्यशैली निरंकुश शासक बन्ने संकेत हो ।
यहाँलाई सञ्चारमन्त्री भइसकेको अनुभव छ, अहिलेको सञ्चारमन्त्री त सञ्चार क्षेत्रबाट नै आउनु भएको हो, उहाँको कार्यशैलीलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
म सञ्चारमन्त्री हुँदा र अहिलेको सञ्चारमन्त्री कार्यशैलीलाई मैले जवाफ दिनेभन्दा पनि सञ्चार क्षेत्रकै साथीहरुले विश्लेषण गर्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ, तैपनि म केहि बोल्छु । सञ्चार मन्त्रालय निकै संवेदनशिल एवम् जिम्मेवारपूर्ण मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालय नै सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालय हो । सञ्चारमन्त्री जसको प्रवक्ता हुन्छ । सञ्चार मन्त्रालयको पनि मुलुक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । विकासका लागि सञ्चारमन्त्री र मन्त्रालयले सबैभन्दा बढि काम गर्न सक्छ । मुलुकका लागि केहि काम गर्छु भन्नेका लागि यो मन्त्रालय निकै महत्वपूर्ण छ । मैले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा विदाको दिनमा पनि बेलुकी १० बजेसम्म काम गरेको छु ।
अहिलेको सरकारले मेरो कार्यकालमा भएका राम्रा कामलाई जर्वजस्ती ‘फलो’ गरेर आफूले गरेको भनिरहेको छ । मेरो पालामा भएका कतिपय राम्रा कामलाई फेरी सञ्चारकर्मीहरुलाई बोलाएर समाचार लेखाइएको छ । र, अहिलेका सञ्चारमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ फिटिक्कै गर्न सकेका छैनन् । उहाँ सञ्चारकर्मीसँग नै विवाद गरेर बसिरहनु भएको छ । आफैं गलत जवाफ दिने अनि आफैं पहुँचको भरमा कार्याक्रम बन्द गर्दै हिड्नु भएको छ, जुन निकै नैतिकहिन काम हो । गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले के बोल्ने र के नबोलने ? त्यो विचार गर्नु पर्ने हो । छिमेकीलाई उपहार स्वरुप भालु दिने कुरालाई उहाँ भाले दिने भन्नुहुन्छ, जुन मुलुककै बेइजती हो ।
अहिले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आफूनिकटका सञ्चारकर्मी र आफ्नो पार्टीको लगानीमा सञ्चालित मिडियालाई बोलाएर सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्नुस्, विपक्षसँग प्रतिकारमा उत्रनुस् भन्दै स्वतन्त्र प्रेसलाई दुरुपयोग गर्न थालिएको छ । ‘हाम्रो पार्टी र सरकारलाई सहयोग गर्नुस्, हामीले भनेको काम गर्नुस्’ भन्नु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो हसतक्षेप हो । यस्तैयस्तै काममा सञ्चारमन्त्रीले समय विताईरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ ।